पोहोर पनी आउँछु भन्दा भन्दै आउन पाईएन… | Bardiya Online
पोहोर पनी आउँछु भन्दा भन्दै आउन पाईएन…
सौगात श्रेष्ठ | प्रकाशित मितिः शनिबार, कार्तिक १३, २०७३ ::: 817 पटक पढिएको |
– सौगात श्रेष्ठ
हेर्दा हेर्दै यो वर्षको तिहार पनी घर आगन मै आई पुगेछ । गाउँघरमा आँगन भरी सयपत्री र मखमली फुलि रहेको होला, केटाकेटीहरु नयाँ नयाँ कपडामा रमाई रहेका होलान । उता घरदेशमा आँगन भरी सयपत्रीहरु फुल्दा यो प्रदेशीको मन भने ओईलाइ रहेको छ । उता चारै तिर झिलीमिली दिपहरु बलि रहँदा, यो मन औंशीको रात जस्तै अँधेरीएको छ । उता गाउँमा युवाहरु देउसी भैली खेल्ने तयारी गरि रहेका होलान तर म भने यता ड्युटिमा जाने तयारी गरि रहेको छु । यस्तै छ प्रदेशीको जिवन । प्रदेशीलाई के को चाड तिहार…..
वर्षौं अघि बन्धकीको पाखोबारी उकास्ने र काजी साहुको ऋण चुक्ता गर्ने सपनाहरुलाई अघि लगाउँदै, यो विरानो शहरमा पाईला टेक्नका लागी झिमिसेमै गाउँ छोडेको त्यो समय सम्झिरहेको छु । जिन्दगीमा सँधै आफुले सोंचेको जस्तो मात्रै पनी नहुँदो रहेछ । अझ यो प्रदेशी जिवन त दुःखै दुःखले घेरिएको हुँदो रहेछ । उजाड बगर जस्तै हुँदो रहेछ । भागेर जाउँ त कहाँ जाउँ ? नजाउँ त यादहरुले औधि सताउँछन ।
घर परिवार, साथी संगी, वनपाखा त्यो उकाली ओराली अनी भन्ज्याङ चौतारीहरु, बाल्यकाल विताएका गाउँबस्तीको मायाँ लागेर आउँछ । यो विरानो शहरमा म एक्लिएको छु । आफ्नै सपनाहरु बाट, आफ्नै रहरहरुबाट । यो मन भन्ने चिज पनी बडो अचम्मको हुँदो रहेछ । कहिले के खोज्छ, कहिले के ? अरुबेला त जसोतसो सम्हालिन्छ यो मन, तर चाडबाडको बेला भने कसै गरे पनी बुझ्दै बुझ्दैन । औधी पिरोली रहन्छ गाउँघरको सम्झनाले । खुनखुनाई रहन्छ मन, दशैंमा नयाँ लुगा किनिदिन भनेर केटाकेटी खुनखुनाए जस्तै । प्रदेशी जिवन सँधै आफुले सोंचे जस्तो त कहाँ हुन्छ र ? खैर छाडौं यी सबै कुरा …
म त कस्तो काल्पनिक मान्छे जस्तो संधै कल्पनापुरमा गएर चाडबाड मनाउनु पर्ने । दिदी, गाउँघरमा त तिहारको रमझम बढ्दै होला । टोल छिमेक अनी रनबन सबै तिहारको माहोलले तातेको होला है ? हजुरलाई याद छ दिदी ? ६ वर्ष पहिलेको तिहारको कुरा हो । म जिद्दी गर्दै लामो समय सम्म पिङमा झुण्डीए पछी हजुरले मलाई फकाउँदै मिठाई दिएर पिङ आफै खेल्नु भएको । अनी म नमाने पछी हजुरले आफ्नो धोको पुरा नगरिकनै मलाई फेरी खेल्न छोडीदिनु भएको थियो नी । त्यो घमण्डी बानीले मलार्ई आज सम्म अर्कै महसुस गराई रहन्छ ।
मलाई हिजो जस्तै लाग्छ दिदी । हजुरहरुको पछी पछी लागेर भैली खेल्दै हिँडेको, मलाई मन पर्ने मिठाईहरु किनेर दिनुहुन्थ्यो तपाईं म फुरुङ्ग परि रहन्थें । भाईलाई मन पर्छ भन्दै आफुलाई कसैले केहि दिए पनी नखाएर मेरै लागी ल्याईदिनु हुन्थ्यो । म दुःखी भएर बसेको बेला के के के के भनेर जिस्काएर मलाई हसाईं रहनु हुन्थ्यो । जब देखी म स्कुल जान थालें मेरो साथी पनी तपाईं नै हुनुभयो । स्कुलमा कसैले मलाई केही गरे तपाईंले उनीहरुलाई गाली गर्नु हुन्थ्यो । मलाई अझै पनी याद छ दिदी ।
बालापनहरु कती रमाईलो थियो । म बारम्बार सम्झि रहन्छु पहिलेको तिहारहरु, जब हजुरले मखमलीको माला लगाई दिनु हुन्थ्यो, म बिझायो भन्दै छिनमै निकालेर राखिदिन्थें । तपाईं फूल बदाम, ओखर हरुको घोल शिरबाट खनाउनु हुन्थ्यो म त्यसैमा ओखर बदाम खोज्न थाल्थें । कती चकचके थिएँ है दिदी म । तर वर्षों भएछ ति क्षढाहरु वितेर गएको ।
दिदी… तपाईंको हातको सप्तरंगी टिका र मखमली माला लगाउन नपाएको पनी ४ वर्ष हुन्छ यो तिहारमा । यो अर्काको देशमा के दशै, के तिहार ? पोहोर पनी आउँछु भन्दा भन्दै आउन पाईएन, यो वर्ष त जसरी पनी आफ्नै बस्तिमा फर्किन्छु भनेको थिएँ तर यो पटक पनी ति चाहनाहरु अधुरा अपुरा नै रहे । यहाँ आउन मात्रै सजिलो रहेछ, फर्कन भने औधी गाह्रो ।
आजभोली त आफ्नै जिन्दगी पनी जिन्दगी जस्तो छैन । मेरो भाग्य भनौं की, बाध्यता, नचाहँदा नचाहँदै पनी प्रदेशिनु पर्‍यो ।
कती मन रोएको होला है तपाईंको ? सबैको भाई घर फर्किंदा अनी आफ्नो भाई भने प्रदेशमा हुँदा आँगन छेउको मखमली र सयपत्रीले कती मन पिरोल्दोहो तपाईंको । यसपाली पनी यस्तै भो दिदी, अर्को वर्ष भने आउनेछु, दशैं तिहार संगै मनाउन । के गर्नु दिदी यो विदेशमा आउन जती सजिलो छ त्यती सजिलो भने छैन फर्किनको लागी ।
धेरै पटक भएछ यो साल आउँछु अर्को साल आउँछु भनेको पनी । तर के गर्ने दिदी यहाँ विदेशमा न समय आफ्नो हुन्छ न निर्णय । मान्छेको इच्छा र भावना संग मतलब हुँदैन रहेछ ।
भनिन्छ नी दुःख पछि सुख आउँछ । अनी दुःख भएपछी मात्र सुखको अनुभुती हुन्छ । दिदी प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ भन्छन । म यो अघोषित जेल जीवनको करार अवधी सकेर आउनेछु । अनी आफ्नो समय, आफ्नो गाउ“घर, आफ्नै परिवेशमा तिहार संगै मनाउ“ला । यो वर्षको तिहार पनी यस्तै भयो । अर्को सालको तिहार निकै खुशी साथ मनाउँला है दिदी । यसपालीको तिहार जसातसो रमाएरै मनाउनु होला । टोलका सबै जना मिलेर देउसी भैलो खेल्नुहोला । अनी तिहार मनाई सके पछी तिहार कस्तो भयो सुनाउनु होला है दिदी ।
तिहारको दिप जस्तै अन्धकार चिर्दै बलि रहनु होला । दिदी भाईको आत्मिय सम्बन्ध सदा जिवीत रहोस ।
बुवा–आमा, तपाईंहरु अनी गाउँघरको सम्झनाले औधी सताउँछ । हुन त दिनहुँ हजुरहरु संग Skype, Viber मा कुराकानी र Facebook मा Chat नभएको त होईन तर पनी यो मनले कहाँ मान्छ र दिदी ?
भन्न मन लागेका कुराहरु त धेरै थिए तर समय भने औधी कम छ । भोली विहान सबेरै ड्युटिमा जानु पर्छ, जति लेखे पनी सकिंदैनन मनका बेदनाहरु रात पनी ढल्कीन लागेछ त्यसैले यो पत्रलाई अधुरै गरी छोडिदिएँ । बुवा–आमालाई ढोग संगै सम्झना सुनाईदिनु होला । जसोतसो बिताउनुहोला यसपालीको तिहार, अर्को पटक भने संगै मनाउँला ।
तस्विर हेरी आफ्नो पन, गराउनु होला ।
कठोर मुटु कठोर झन, गराउनु होला ।
आउन पाईन यसपाली नी, खाली हुन्छ निधार,
जसो तसो खुशी मन, गराउनु होला ।।
फूल, प्रकाश, रंग, संगित, प्रेम र भातृत्वको प्रतिक शुभ दिपावलीले सबैको जिवन उज्यालो, रंगिन, सुमधुर तथा आनन्दमयी बनाओस । सब्बै सबैमा हार्दिक मंगलमय शुभ कामना ।।
चितुवाको छाला किनबेच भइरहेको अवस्थामा दुई जना पक्राउ
उपशाखा स्तरीय जुनियर युवा रेडक्रस गोष्ठी सम्पन्न
भुरिगाउँमा एक दिने कान शीविर सम्पन्न, १२० जनाको चेकजाँच
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा बर्दियाका राजनीतिक दलद्वारा प्रचार प्रसारमा तिव्रता